Ruby on Rail စာအုပ်များ - MYSTERY ZILLION
Ruby on Rail စာအုပ်များ
July 2007 edited January 2009 in Ruby On Rail
Size : 4922 KB
:77: ကျေးဇူးပါဗျာ ၀င်မရေးဖြစ်တာလဲကြာပြီ
ကိုစေတန်ပဲ Intro လုပ်ပေးပြီး
အခုလို learning လုပ်ဖို့အတွက် လင့်တွေ ပေးတော့ :77: ကျေးဇူးကဗာပါ။
recommand လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေ အများကြီးပါ။
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်ဖတ်မှ နားလည်တော့တယ်.. \_:D/
Hope it'll be useful for anyone who loves ROR.
Dear all of fri,
I can't get download the ebook from the rapidshare ,so if u have this ebook pls share me,my email si [email protected]k alot.
လုပ်ပါအုံးဗျို့..:((
This file is not available to free users in China and Southeast Asia. To download it, you must sign up foraDivShare account.
ဒေါင်းလို ့ရတဲ့လူများ တစ်ခြား Link လေးကနေ Share ပေးပါလားဗျာ .:77:
phoenixO1 wrote: »
အဟီး ရတွားပီ . \_:D/
အားရပါးရကိုနှစ်ခါတောင်ဒေါင်းပလိုက်တယ် ( တစ်ခါက cnt ကျသွားတာနဲ ့)
ကျွန်တော်လဲ အဲလိုဘဲ ဒေါင်းမရတဲ့ ရီဂျင်မှာ ရောက်နေလို့ ... အဲဘော်ဘော် တစ်ယောက်သင်ပေးလို့ဗျ ... http://urlgateway.com/ ဒါလေးခံပြီး သွားရင်ရတယ်ဗျ။
အဆင်ပြေတယ် အကိုdba ရေ ..
ပေးထားတဲ့ဒေါင်းလခ့်တွေကဘယ်လိုမှကိုမရဖြစ်နေပါတယ်။ချစ်ကိုကြီးတွေကူညီပါဦး။ Premiun Acount ထဲကိုပဲ၀င်ခိုင်းနေတယ်။ ၀င်တော့လည်းဘာမှကျမလာဘူး။Error တဲ့။လိုချင်ပါတယ်ဆိုမှမရဘူး။ လုပ်ပါဦး။ ဘယ်လိုဒေါငး်ရမလဲနော်။
ကူညီပါဦး။ညွှန်းတဲ့လခ့်တွေအကုန်လုံးကဒေါင်းလို့မ၇ဘူး။ Premium Account ဆောက်ခိုင်းနေပါတယ်။ဆောက်တော့လည်းမပေးပါဘူး။ Ruby ကိုအခုမှကကြီးကစပြီးလေ့လာမလို့ပါ။ဘာမှမသိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်Ruby EBooks တွေအများကြီးလိုချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါဦး။မသိလို့လဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။